Nagu saabsan - Shirkadda Caalamiga ah ee Eugeng
Shirkadda Caalamiga ee Eugeng
Eugeng waa xirfadle hal abuur leh soona saare mashiinada la isku qurxiyo ee Shanghai . Waxaan si xamaasad leh ugu dadaalnaa inaan kor u qaadno sumcadda sii kordheysa ee ka dhex jirta warshadaha qurxinta iyadoo la kulmeysa baahiyaha wax soo saar ee macaamiisha, waxaanan bixin doonnaa tiknoolajiyada ugu dambeysa uguna sarreysa iyo macluumaadka loogu talagalay xalka ugu habboon iyadoo mar walba la hormarinayo baahida macmiilka.
Waxaan leenahay warshad wax soo saar mashiin u gaar ah oo leh koox xoog leh oo R & D ah oo ku taal Songjiang Industry Park.So markaa waan iska kaashan karnaa sameynta alaabooyinka cusub iyo waliba waxaan kuu soo bandhigi doonaa qaab adiga kuu gaar ah. Waxaan naqshadeynaa, soo saarnaa oo aan dhoofinaa mashiinada lipstick-ka, mashiinada saxaafadda ee budada ah, mashiinada buuxiya dhalaalka dhalaalaya, mashiinada mascara, mashiinada wax lagu nadiifiyo, mashiinada buuxinta qalin qurxinta, mashiinada budada ah ee la dubay, calaamadeeyayaasha, kiishka kiishka, makiinado kale oo isku qurxin midab leh iyo wixii la mid ah.
Farxad weyn, waxaan jeclaan lahayn inaan ganacsi la yeelano shirkaddaada sharafta leh fursaddan aan ku kordhinayno waxqabadkeena. Haddii aad dareento inaan suurtagal ka dhigi karno rabitaankaaga ama aan kaa caawin karno wax kasta oo jira, fadlan ha ka waaban inaad nala soo xiriirto. Markaad qandaraas la galeyso Eugeng, ma noqon doontid macmiilkeenna waxaad noqoneysaa lamaanahayaga.
Shirkadda Waxsoosaarka Ku Takhasusay Mashiinka Qurxinta
1. Ku soo dhawow OEM sanduuqa is haysta
2. Ku soo dhawow OEM wax soo saarka qurxinta sida lipstick, lipss gloss, mascara iyo wixii la mid ah.
3. Ku soo dhowow inaad wakiil noo noqoto Waddankaaga
4. Waqtiga damaanadda waa hal sano
5. Bixinta fiidiyowyada taageerada khadka tooska ah, 24 saacadood oo khadka tooska ah iyo buug loogu talagalay adeegga farsamada
6. Sii alaab dayactir waqti kasta oo aad u baahato
Teknoolojiyad patenti ah
Kooxda R & D
moodooyinka cusub / sanadka
Aad ayaan ugu faraxsanahay inaan fursaddan uga faa'iideysanno inaan ganacsi kula yeelano.